NABAD-DOON: Xiddiga Liverpool Ee Bobby Firmino Oo Ku Tartamaya Abaalmarin Culus, Madaxweyne Ay Isku Dhibco Yihiin & Mid Uu Ka Sarreeyo - Gool24.Net
NABAD-DOON: Xiddiga Liverpool Ee Bobby Firmino Oo Ku Tartamaya Abaalmarin Culus, Madaxweyne Ay Isku Dhibco Yihiin & Mid Uu Ka Sarreeyo
Jamaahiirta kooxda Liverpool ayaa ku kaftamay in weeraryahankooda Roberto Firmino dhoola-caddeyntiisu ay dunida badbaadin lahayd kaddib markii si lama filaan ah loogu arkay liiska tartamayaasha abaalmarinta weyn ee Nobel Peace Prize ee sanadka 2021.
Firmino ayaa xilli ciyaareedkan markale wacdarro u dhigaya kooxdiisa isaga oo 11 gool iyo 12 caawimo kasoo sameeyay tartamada oo dhan kana caawiyay inay 25 dhibcood oo nadiif ah ku hayaan hoggaanka Premier League.
Liiskan lagu qiimaynayo fursada loo kala haysto hanashada Nobel Peace Prize 2021 ayuu soo saaray il-wareedka SBD iyadoo saadaasha la siiyay Firmino ay tahay +3300 xilli uu ugu cad cad yahay ilaa haatan Greta Thunberg oo ka shaqeeya arrimaha cimilada.
Abaalmarintan oo la siiyo shaqsiyaadka nabada iyo wanaagyada kala duwan ee dunida ka shaqeeya ayuu liiska Firmino kula jiraa madaxweynaha Maraykanka ee Donald Trump oo isagu ka sarreeya halka ay isku dhibco yihiin madaxweynaha .
Liiskan ayaa ah mid ka kooban sharadyo kala duwan oo ay dhigteen shaqsiyaadka isticmaala bogga SBD, qoraalkan ayaa ugu horreyn la daabacay bishii March balse waxa dib loosoo dhigay markale shalayto boggaas.
Jamaahiirta Liverpool ayaa aad ula yaabay lana dhacay in weeraryahanka kooxdooda oo ay kaliya kubadda cagta iyo muhiimada kooxdooda uu u leeyahay ay ku ogaayeen inuu kusoo baxo shaxdan.
Arrinta mucjisada ah ayaa ah inay sidoo kale Firmino isku boos ku jiraan Bill Gates oo kamida raga dunida ugu taajirsan halka uu kaba sarreeyo madaxweynaha France ee Emmanuel Macron.